Global Voices teny Malagasy » “Milamina Any Damaskosy “: Tatitra Rosiana Avy any Syria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Septambra 2013 1:32 GMT 1	 · Mpanoratra Andrey Tselikov Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Syria, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Tsidika, Akon'ny RuNet
Tsena iray any Syria, araka ny nandefasan'ny Televisiona NTV azy tamin'ny 3 Septambra 2013. Lahatsary nalain'i Anhar Kochneva. Dikasary avy amin'ny YouTube.
Tsy araky ny politika any Rosia intsony ny fanohanana ny fitondran'i Bashar al-Assad. Ny fanahiana lalina ny amin'ny fidiran'ny tafika tandrefana miampy ny fisian'ireo vondron'ny mpikomy Silamo any an-toerana no mitarika ireo tsy tia ankitsirano an'i Kremlin hiatrika an'i Vladmir Putin momba ny olana any Syria. I Maria Baronova, mpikatroka mafàna fo avy amin'ny mpanohitra ohatra izay tsaraina noho ny nandraisany anjara tamin'ilay fivoriana nivadika ho herisetra tamin'ny taona lasa, dia nibitsika an'ity momba ilay fanafihana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana simika tao akaikin'i Damaskosy tamin'ny 21 Aogositra:
Tompokolahy isany, antenaiko fa azon'ny rehetra ilay resaka fampiasana fitaovam-piadiana simika izay karazanà tetika maizina narafitry ny Amerikana ?
Tahaka ny vaovao avy amin'i Sergey Ponomarev, mpaka sary, izay tany Damaskosy tamin'ny fotoana nisehoan'ilay fanafihana ary nibitsika nametra-panontaniana momba ny tatitry ny MSF milaza fisianà fahafatesana noho ny entona mahafaty fotoana fohy taorian'izay no voarain'i Baronova :
@AltePute  @ponny1  Tobim-pitsaboana telo izao no efa nalehako, nambaran-dry zareo tamiko fa tsy misy maratra ao amin'ireo. Raha misy mahafantatra tobim-pitsaboana miara-miasa amin'ny MSF, mba te-ho any aho.
Rosiana iray hafa i Nigina Beroeva, mpanao gazetin'ny Komsomolskaya Pravda, nibitsika avy any Damaskosy, nisalasala ny amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana simika :
@madoleroyer  teto izahay, raha tena mafy tokoa ny fanafihana ka nahafaty olona 1.300, tokony ho nahatratra anay koa ny entona.
Taty aoriana kely, nitanisa loharano avy any an-toerana i Beroeva :
Niteny tamin'ilay lehilahy mipetraka miaraka amin'ny fianakaviany any akaikin'ny faritra misy ny ady aho. Fa tsy misy fampiasana fitaovam-piadiana simika izany teo, hoy izy. Tokony ho reny ilay izy.
Ankoatra izay, ho an'ireo mpanao gazety toa an-dry Beroeva sy Ponomarev, izay nankany Syria fotoana fohy mihitsy mba hitatitra ny zava-misy any, misy Rosiana maro, mpitoraka bilaogy, monina any amin'izao fotoana izao ary mitoraka bilaogy avy any amin'io firenena io. Tahaka ny ankamaroan'ny vahoaka Rosiana dia manohana ny fitondran'i Assad ireo mpitoraka bilaogy ireo. Iray tena miavaka amin'ireny i Anhar Kochneva, vehivavy Rosiana-Palestiniana monina any Damaskosy. Niasa taminà orinasa misahana ny fizahan-tany izy talohan'ny nanombohan'ny ady, saingy dia nanoratra haingana ho an'ny mpiteny Rosiana mikasika ilay ady izy. Nahazo manokana ny fahalinan'ny olona izy tamin'ny taona lasa, rehefa nalainà vondrona heverina ho mpihoko an-keriny ary nanao izay handosirany rehefa notànan-dry zareo nandritra ny 152 andro.
Na dia teo aza izany traikefa ratsy amin'ny ady any Syria izany dia te-hanome antoka  ireo mpamaky ny asa sorany momba ny fahamarinan-toeran'ny fitondrana i Kochneva :
Tsy misy zava-doza mitranga izany eo. Mandeha any amin'ny trano fialana hetaheta sy fisakafoanana ny olona, miantsena ary mandeha mitetitety mizaha tanàna ao an-toerana. ‘Ndao lazaina ny MARINA. Ary aza manao na inona na inona mba hiheveran'izao tontolo izao hoe tena mifotetaka amin'ny tany i Syria !
Raha izao tontolo izao niandry ny daroka baomba hamelezana an'i Assad tamin'ny 29 Aogositra, dia izao indray no nosoratany :
Homs, Hama, Tel Kalyah, Masyaf, Banias, Jableh, Lattakia, Tartus… EO AMBANY FIFEHEZAN'NY GOVERNEMANTA NY ZAVA-DREHETRA. EVERYTHING IS UNDER GOVERNMENT CONTROL. Milamina ny zava-dretra any Damaskosy.
Amin'ny ankapobeny dia tahàka ny miombon-kevitra i Beroeva sy Ponomarev. Nibitsika i Beroeva fotoana fohy taorian'ilay fanafihana tamin'ny entona :
Tsy hino ianareo, saingy milamina ny rehetra any Damaskosy. Mipetraka eny amin'ny trano fisotroana kafe, mandeha eny an-dàlana ary lavitry ny fitaintainana ny olona
Nolazain'i Ponomarev ihany koa fa “tsy niova” ny firenena hatramin'ny 2009, somary afangarony amin'ny hanihany kely ny zava-misy marina amin'ny ady mitam-piadiana izay nampidina ny hofan'ny trano fandraisam-bahiny any an-toerana :
300€ [isan-kalina] ny hofan'ny trano fandraisam-bahiny ao afovoan-tanàna [taloha] manjary 50$ ka hatramin'ny 70$ izany izao, 20$ ny sakafo ho an'olona telo miampy divay
Misy zavatra hafahafa nefa mahazatra ny vahoaka rosiana ao amin'io fitantaràna io — rehefa omena io endrika io ny tsy fifankahazoana dia ohatra ny hoe tsy nisy ady be sy tsy misy herisetra misoko miadana izany any Dagestan sy Ingushetia. Eny, misy ireo jiolahy/mpampihorohoro/ mpikomy/ jiadista saingy lavitra izy ireo ary mitoka-monina ara-jeografia. Marina fa nisy ny maty, nefa ny 90%-n'ny vahoaka dia mbola ao– farafaharatsiny aloha mandra-panimbàn'ny hetsika ataon'ny tafika eny akaikin'ireo toerana fialan-tsasatra. Fantatry ny Rosiana tsara izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/15/51325/
 nalainà vondrona heverina ho mpihoko an-keriny : http://islam-today.ru/politika/sirijskaya_plennicza_o_sirii__chast_1/
 te-hanome antoka: http://anhar.livejournal.com/2125031.html
 nosoratany : http://anhar.livejournal.com/2148080.html